Xukuumada Masar oo sheegtay in ay taageero siineyso dowladda KMG Soomaaliya. | goboladaradio.com	Thursday, June 20th, 2013	Home
Xukuumada Masar oo sheegtay in ay taageero siineyso dowladda KMG Soomaaliya.
Published on August 10, 2012 by daahir faarax · No Comments Published on August 10, 2012 by Dayax (Goboladaradio) dowlada wadanka Masar ayaa sheegtay in ay taageerayso lixaad leh siineyso dowladda KMG Soomaaliya ee iminka uu waqtigeedu sii dhamaanayo.
Masar ayaa shaacisay in ay taagerayso dowlada KMG Somaliya, kana taagerayso sidii loo socelinlahaa ammanka iyo kala dambeyntii uu lahaay ladig ku ah dalka Somaliya, islamarkaana looga ammaanka dalka ee ka dhaca Soomaaliya.
Cumruu Rushdi Afhayeenka wasarada Arrimaha Dibadda ee dowlada Masar ayaa tibaaxay in looga bahanyahay beesha calamka inay sidhab ah u tageerto soo celinta ammankii iyo ka hortaga dilalka qorshaysan ee lagulakaco dad aan waxbo galabsan oo ka dhacaya qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in Masar ay la qeybsanayso walalohoda Soomaaliya dhibatada haysata kana tagerayso dhinacyada siyaasada, dhaqaalaha, waxbarashada iyo hormarinta arimaha bulshada.
Shirweyne qaran oo looga hadlaayo ar
Maamulka Ximan iyo Xeeb oo wada qaba
Xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya oo a
Qarax qasaaro dhaliyay oo ka dhacay Bulshada ku dhaqan deegaanada X&
(Oct 26, 2012 Goboladaradio) Fagaaraha Weyn ee ku yaala Afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ...	online user counter